Golaha ammaanka ee QM oo cusboonaysiiyay cuno-qabataynta hubka Soomaaliya iyo Eritrea | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Golaha ammaanka ee QM oo cusboonaysiiyay cuno-qabataynta hubka Soomaaliya iyo Eritrea
Golaha ammaanka ee QM oo cusboonaysiiyay cuno-qabataynta hubka Soomaaliya iyo Eritrea
Golaha Ammaanka ee QM ayaa cusboonaysiiyay cuno-qabataynta dhanka hubka ah ee saaran wadamada Soomaaliya iyo Eritrea, ka dib shir shalay oo Khamiis ahayd ay kun yeesheen xaruntooda Magaalada New York ee dalka Maraykanka.
15 xubnood ee xubnaha joogtada ka ah Golaha ammaanka ee QM ayaa 10 ka mid ah u codeeyay halka 5 wadan oo shiinaha uu ka mid yahay ay ka aamuseen.
“Cusboonaysiinta cuno-qabataynta Soomaliya iyo Eritrea waxaa mid lagu xadidayo hubka gala Soomaaliya iyo Eritrea iyo baqdinta ku aadan in hub gacanta uu u galo dhaqdhaqaaqa Al-shabaab” ayuu yiri safiirka Golaha Amaanka u qaabilsan dowladda Ingiriiska Matthew Rycroft.
Guddiga dabagalka arrimaha Hubka Soomaaliya iyo Eritrea ayaa dhowaan daabacay warbixin dheer oo ay kaga hadlayeen arrimaha Hubka, ayagoo sheegay in aan wali wax cadayn ah u helin in Al-shabaab hub ay ka helaan dowladda Eritrea.
Previous articleUN Secerity Council renews Somali -Eritrea arm embargo
Next articleQM oo ka hadashay dagaallada Magaalada Gaalkacyo